Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » OoSokhemesti baseAlberta: Oyena Mboneleli mkhulu omnye woGonyo lwe-COVID-19 e-Alberta
Oosokhemesti baseAlberta baphinde babetha elinye inqanaba kule veki iphelileyo, ngoku belawule ngaphezulu kwe-3.3 yezigidi ze-COVID-19, nto leyo ebenza babe ngoyena mboneleli mkhulu wogonyo lwe-COVID-19 kwiphondo.
Le mpumelelo yakhela kuxanduva lwangaphambili loosokhemesti kwimpilo yoluntu, kubandakanywa nendima yabo yokugonya umkhuhlane, isifo sepneumococcal, kunye nediphtheria-tetanus-pertussis. Kunyaka ophelileyo, oosokhemesti base-Alberta balawula ngaphezulu kwesigidi sokudubula komkhuhlane, kwaye kulo nyaka baye bakhawuleza baba ngabona baboneleli ngomkhuhlane, belawula i-80% yazo zonke izithonga zomkhuhlane kwiphondo. Oosokhemesti banokubonelela abantu base-Albert abaneminyaka engama-65 ukuya phezulu ngesitofu sabo sokugonya i-pneumococcal (pneumo) kwaye bakhusele abasetyhini abakhulelweyo ngokuchasene ne-diphtheria-tetanus kunye ne-pertussis (dTap).
Ngokufaneleka okwandisiweyo kutsha nje kweedosi ze-COVID-19 ze-booster kwiphondo, kucacile ukuba oosokhemesti base-Alberta baya kuqhubeka bexakekile kunangaphambili njengoko besebenzela ukuhlangabezana nemfuno yabantu base-Alberta kwizitofu zokugonya ezixhaswa ngurhulumente kwikhemesti yasekuhlaleni.